Homeविश्व खबरदिल्लीको दृष्टि सिक्किम अलग देश !
May 24, 2020 kandai kanda 1 विश्व खबर
एजेन्सी, ११ जेठ । कोरोना भा,इरबाट जोडिएको भारतको नयाँ दिल्ली सरकारको एक विज्ञापन सामाजिक मिडियामा वि,वादको विषय बनेको छ । उक्त वि,वाद यस्तो हदसम्म बढिसकेको छ कि दिल्ली सरकारका सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध का,रवाही समेत भएको छ ।
डायरेक्टर अफ सिभिल डिफेन्स (हेड क्वार्टर) का एक बरिष्ठ अधिकारीलाई निल म्वित गरिएको छ । साथै दिल्ली सरकारले यो विज्ञापन पनि फिर्ता लिएको छ । तर प्रश्न यो उठेको छ कि दिल्ली सरकारको उक्त विज्ञापन आखिर त्यस्तो के कुरा थियो ? जुन चल्ने वितिकै एक अधिकारका नि लम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
विवादको विषय दिल्ली सरकारले आफ्नो एक विज्ञापनमा कोरोना भा,इरस विरु द्धको यु,द्धमा सामेल हुन मानिसहरूलाई अनुरोध गरेको थियो। यस विज्ञापनमा कोरोनाबि रूद्ध यु द्धमा भाग लिने व्यक्तिको योग्यता लेखिएको थियो। र यो योग्यतामा (भारतका नागरिकहरू, वा सिक्किम, भूटान र नेपाली, र दिल्लीका नागरिकहरू) लेखिएको थियो । यस लाइनमा सिक्किम छिमेकी देशहरूसँग लेखिएको छ र यही कुरा अहिले समग्र भारतमा वि,वादको विषय भएको छ।
सिक्किमको सरकारले वि,रोध जनाउँदै यस विज्ञापनवि,रुद्ध कडा वि,रोध दर्ता गरेको छ। सिक्किम सरकारको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा यस्तो लेखिएको छ,“सिक्किमको सरकारले दिल्ली सरकारको यस विज्ञापनलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ, सिक्किमलाई एक विदेशी देशको रूपमा देखाउँदै। सिक्किमका मुख्य सचिवले दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रका प्रमुख सचिवलाई पत्र लेखेर यस ग ल्तीलाई तुरून्त सुधार गर्न र सिक्किमको राष्ट्रिय भावनालाई ध्यानमा राखी कदम चाल्न माग गरेका छन्।”
यसका साथसाथै सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले पनि यस मुद्दा मा आफ्ना वि रोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनले सोशल मिडियामा लेखे, “सिक्किम १९७५ पछि भारतको एक हिस्सा हो।” समाचार एजेन्सी पीटीआईले यस विषयमा तामाङको बयानमा ट्वीट गरेको छ ।
तामाङले भने, “दिल्ली सरकारको विज्ञापनमा सिक्किमका जनतालाई नेपाल र भूटान भन्दा फरक देखाउँदै खे दजनक, आ पत्तिजनक र भारतको संघीय संरचनाको लागि हा निकारक छ।” नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र एलजीले कारबाही गरे अनि केजरीवालले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा लेखे, “सिक्किम भारतको अभिन्न अंग हो। यस्तो ग ल्तीलाई सहन सकिदैन। विज्ञापन फिर्ता लिइयो र सम्बन्धित अधिकारीको वि रुद्ध का रबाही भएको छ।”
पहिला राष्ट्रियता, अनी मात्र साथीभाई’,प्रम ओलीलाई सलाम : नायिका निता